Izindaba - Izingubo zikaPinyang zakha indawo yokusebenzela ekwazi ukuguquguquka ehlanganisa ukweluka, ukudaya nokuthunga
Izingubo zePinyang zakha indawo yokusebenzela ekwazi ukuguquguquka ehlanganisa ukweluka, ukudaya nokuthunga
Ama-oda wezingubo ezimbili noma ezintathu kuphela angamukelwa
Ngenxa yokungena "kwemboni yobhejane" ka-Alibaba, ukuguqulwa okukhaliphile komkhakha wokukhiqiza izingubo sekuyisihloko esishisayo embonini futhi. Empeleni, njengoba imfashini yezingubo zomkhiqizo zamazwe omhlaba ithanda ukuba “yimfashini esheshayo”, sekuyikhono eliyingqayizivele kumafemu akhiqiza izingubo ukuqinisekisa ukuthi anganqoba emncintiswaneni onamandla wokuhlangabezana nezidingo zokukhiqiza zezinhlobonhlobo eziningi, iqoqo elincane futhi impendulo esheshayo.
Njengebhizinisi elidala lendwangu elinomlando weminyaka eyi-12, ukusebenzisa wonke amathuba anikezwa yizikhathi kuyisikhali somlingo sokuchuma okuhlala njalo. Kusukela ngo-2019, iphrojekthi iguquliwe, isuka ekwelukeni, ekuphrinteni nasekudayeni iye ekuthungeni nasekuthungeni ngobuchwepheshe bolwazi Imodeli yokuthengwa kokukhiqiza okukhiqizayo nokukhiqiza okuguquguqukayo sekusungulwe kuzo zonke izixhumanisi zalo lonke uchungechunge lwemboni. Namuhla, isikhathi sokulethwa kwama-oda esikhungo sezimboni sePinyang sidluliselwe kusuka ezinsukwini ezijwayelekile ezingama-40 kuye ezinsukwini eziyi-15, futhi ama-oda wokubuyisa okusheshayo (ama-oda anezingcezu ezingaphansi kuka-2000) adluliselwe ezinsukwini eziyi-7. Ngibonga le mpendulo esheshayo.
I-oda lincane, kubi kakhulu. Lokhu kungukuvumelana komkhakha wezingubo. Njengamanje, amanye ama-oda asekhaya anezicucu ezi-2 noma ezi-3, futhi kunezingcezu eziyi-128 kuphela ze-SKU eyodwa yomkhiqizo wezemidlalo waphesheya kwezilwandle, okuyisidingo ngokuphelele seqoqwana elincane, iqoqwana eliningi nesikhathi sokulethwa okusheshayo. Amabhizinisi ukuphishekela ukusebenza kahle, ekugcineni ukuthuthukisa ukuncintisana, abanye abakwazi ukwamukela ama-oda ongawathatha, lokhu kuyinzuzo. Lokhu kusiza nasekuthuthukisweni kwamabhizinisi isikhathi eside. "